र’क्सीले फिटान भएर चो’री गर्न घरमा छिरेका यी चो’र सोफामा निदाएपछी…प्रहरी नै चकित ! « गोर्खाली खबर डटकम
र’क्सीले फिटान भएर चो’री गर्न घरमा छिरेका यी चो’र सोफामा निदाएपछी…प्रहरी नै चकित !
एजेन्सी। भारतको कर्नाटक राज्य’बाट सुन्दन अनौठो लाग्ने समाचार बाहिरिएको छ । दक्षिण कन्नड क्षेत्रमा एक चो’र चो’री गर्नको लागि भन्दै घरमा छिरेका थिए । तर र’क्सीले फिटान भएर गएका उनले चो’री नगरी त्यहीँ सुतिरहे जसका कारण घरका मानिसले उनलाई नियन्त्रणमा लिएका छन् । त्यहाँको घर पसेको चो’र एकदमै र’क्सी मनपराउने स्वभावको रैछ । छतको टायर फु’टाएर घरमा छिरेको चो’रले साँचो खोज्न थाले । टिभी र्याकमा राखिएको चाबि फेला पारेका उनी सोफामा एकछिन पल्टिए ।
चाबी लिएर सोफामा पल्टिएका उनी त्यहीँ निदाए । बिहान घरका मानिस उठ्दा उनी सोफामा सुतिरहेका थिए । त्यसपछि उनलाई घरमालिकले प्रहरीको जिम्मा लगाए । घ’टनाबारे प्रहरीले अहिले अनुसन्धान र कार’वाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यस्तै,नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालमा को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण फैलिन नदिन चीनले नेपालमा हुने नियमित उडानलाई घटाएको दा’बी गरेकी छन् । उनले समूहमा हुने भ्रमण तथा चिनियाँ कामदारहरुको फिर्तालाई रोक लगाएको बताएकी छन्। बिहीवार दूतावासमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालसँग दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा राजदूतले चीनमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षाका लागि चिनियाँ सरकारसँग काठमाडौं स्थित चिनियाँ दूतावास निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताएकी छन्।